အလိုအလျောက် groove စည် Cone စေရန် Cone(bobbin) စက်ဝါဂွမ်းချည်အကွေ့အကောက်�bobbin�းသောချည်ခင် - တရုတ်အလိုအလျောက် groove စည် Cone စေရန် Cone(bobbin) စက်ဝါဂွမ်းချည်ပေးသွင်းအကွေ့အကောက်များသောချည်ခင်,စက်ရုံ -FEIHU
အလိုအလျောက် groove စည် Cone စေရန် Cone(bobbin) စက်ဝါဂွမ်းချည်အကွေ့အကောက်များသောချည်ခင်
ထုတ်ကုန်အမည် ဝါဂွမ်း Cone စေရန် Cone Winder စက်ယန္တရား
ဗိုင်းလိပ်တံအရေအတွက် 24(6 ဗိုင်းလိပ်တံ / အုပ်စုတစ်စု)
ဗိုင်းလိပ်တံ gauge မီလီမီတာ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 220V ကို 50HZ 3phase
Max.package အချင်း 250မီလီမီတာ
ယူပါ-up, သွားလာလမ်းကြောင်း 152မီလီမီတာ
ယူပါ-up, မြန်နှုန်း မက်စ်. 1000 မီတာ / မိနစ်
Max.yarn အချင်း ≤260မီလီမီတာ
ပွတ်တိုက်ကြိတ်စက်သတ်မှတ်ချက် ပြားချပ်ချပ် bobbin Φ 80mm×220မီလီမီတာ
အော်တို Stop စက်ပစ္စည်း motion sensor ကို
အီလက်ထရောနစ် Anti-Stack အင်ဗာတာကိုထိန်းချုပ်
auto-မှားသောစိတ်နှင့်ကင်းလွတ် device ကို optional
Cleaner စက်ကို optional
air ကို Splicer optional
အလင်းရောင်စနစ် optional ကို
ရှုထောင့် L ကို 1454 x ကဒဗလျူ 690 x က H ကို 1700 မီလီမီတာ (6ဗိုင်းလိပ်တံ)
ဆန်းသစ်ဖြေရှင်းနည်းများ ,ကြမ်းတမ်းနည်းပညာနှင့်လျှောက်လွှာအအကွေ့အကောက်များသောမြန်နှုန်းကွန်ပျူတာကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်, max ကို 1200M / မိနစ် .precise နှင့်အထိခိုက်မခံမြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း system ကိုတတ်နိုင်သမျှ ပင်အကွေ့အကောက်များသောအရှည်သေချာ (အလေးချိန်) ကဝါဂွမ်း၏ကြိုးအကွေ့အကောက်များသောအဘို့အတော်လေးသင့်လျော်သည် .flax ,ပိုး, ဓာတုဖိုင်ဘာ. နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောကြိုးပေါ်, ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်စနစ်အနေဖြင့်, electromagnetic တင်းမာမှုထိန်းချုပ်မှု ,ဒီစက်ကောင်းသောပုံ .making oiling device ကို ,မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်.
လွန်ခဲ့သော : မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖျ Cone Winder / အကွေ့အကောက်များသောစက် / Bobbin Winder စက်
နောက်တစ်ခု : အလိုအလျောက် groove စည်မြန်နှုန်းမြင့် Cone စေရန် Cone(bobbin) ချည်ခင်အကွေ့အကောက်များသောစက်